VIDEO BAARLAMAANKA KOONFUR GALBEED OO DIIDAY ANSIXINTA SHARCIGA DOWLADAHA HOOSE | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	VIDEO BAARLAMAANKA KOONFUR GALBEED OO DIIDAY ANSIXINTA SHARCIGA DOWLADAHA HOOSE
written by warsan radio 10/05/2017
Xildhibaanada Baarlamanka Maamulka Koonfur Galbeed Soomaliya oo kulan maanta ku yeeshay magaalada Baydhabo Caasimadda KMG ah ee Maamulkaas ayaa wasaaradda Arrimaha gudaha ku celiyay sharciga dowladaha hoose, kaasi oo dhowaan wasaaraddu u gubisay baarlamaankaasi.
Kulanka loogu doodayay sharcigaas waxaa soo xaadiray 66-mudane, Codeynta oo gacan taag ahayd ayaa waxaa kahor yimid in sharcigaan la meelmariyo 35 mudane, waxaa aqbashay 28 xildhibaan, halka 3 xildhibaan ay ka aamuseen.
Intaas kadib Gudoomiyaha baarlamanka Maamulka Koonfur galbeed Soomaliya ayaa sheegay in sharcigaan dib loogu celiyay Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowladda Goboleedyadda koonfur Galbeed Somaliya,islamarkaana la dooonayo In wax ka badal lagu sameeyo.
Qodobada sharciga dowladaha hoose ku qoran waxaa kamid ah in dhammaan maamullada deegaannada K/galbeed aan lasoo magacaabi doonin oo shacabka iyagu dooran doonaan ciddii ay rabaan.
VIDEO BAARLAMAANKA KOONFUR GALBEED OO DIIDAY ANSIXINTA SHARCIGA DOWLADAHA HOOSE was last modified: May 10th, 2017 by warsan radio
DHAGEYSO : BARNAAMIJKA KULANKA WARSAN
Akhriso:-Ra’iisal wasaare Kheyre oo magacaabay wasiirka howlaha guud iyo dib-u-dhiska